Fahasalamana: mampatahotra ny firenena maro ny valanaretina omicron | NewsMada
Fahasalamana: mampatahotra ny firenena maro ny valanaretina omicron
Par Taratra sur 04/12/2021
Tsy mbola misy eto Madagasikara ilay aretina omicron izay efa mampihorohoro ny firenena maro. Haingam-pifindra saingy maivana kokoa miohatra tamin’ilay delta anefa izy raha ny fitrangany. Na izany aza, mamely eto amintsika ny gripa mahery izay mahazo ny ankizy madinika.
Efa maro ny firenena ahitana ilay ilay va­ri­ant vaovao omicron izay efa mandravarava any Afrika Atsimo sy ao amin’ ny Nosy Maorisy izay ma­na­ka­iky indrindra antsika. Efa hita any Hong Kong sy Israely ihany koa ity aretina ity.
Nolazain’ny OMS ny 24 novambra teo ny fisian’izy io ary tsy mbola voaporofo ma­za­va ny mampiavaka ny fo­mba fitrangany raha oharina tamin’ireo variant teo aloha.
Ny dokotera Coetzee, ao Afrika Atsimo no nanao fa­na­irana voalohany ny fisian’ny valan’aretina hafahafa vaovao tamin’ireo tompon’andraiki-panjakana tany an-toerana. Voaporofon’ny fitiliana natao rahateo ny fisian’izany variant vaovao izany.
Anisan’ny lasibatra ireo lehilahy manodidina ny 40 ta­ona. Miseho amin’ny alalan’ ny faharerahana lalina tsy a­min’ny antony, mitohy amin’ ny fanaviana, aretin’andoha ary lasa mikohaka avy eo. Maheno tsiron-kanina sy fofona hatrany kosa anefa ny marary.
Haingam-pifindra ity aretina ity.
Maro ireo firenena manakaton-trano tanteraka toa an’i Etazonia sy ny ao amin’ny vondrona eoropeanina amin’ireo firenena efa ahitana ny aretina. Variant matanjaka lavitra noho ny covid19 ity omicron ity raha ny fitrangany.
Nambaran’ny OMS anefa ny alarobia teo fa tsy dia atahorana ny hivadihan’ny aretina ho zava-doza na hitarika amin’ny fahafatesana raha oharina tamin’ireo varia hafa toy ny Delta izay namono olona maro tao Inde sy ny covid19 niparitaka maneran-tany. Fantatra ihany koa fa tsy mampihena ny herin’ny vaksiny tafiditra anaty vatana koa ny ariant omicron.
Mamely ny gripa mahery, lasibatra ny ankizy
Eto Madagasikara, tsy m­bo­­la voaporofo ny fisian’ ilay va­riant vaovao omicron. Ny tsi­karitra kosa dia mamely ny gripa mahery ary lasibatra in­drindra ny ankizy madinika. Ma­naporofo izany indrindra ny filaharam-be eny amin’ireo to­bim-pahasalamana. Zaza ma­na­vy, misy hafanana, mitady hi­fanintona mihitsy aza, mikohaka, voan’ny sery ary miitatra hatramin’ny fahasemporana no betsaka tonga eny amin’ny do­kotera. Feno ny hopitalin-jazakely sasany satria tsy maintsy hapidirina hopitaly ny ankizy rehefa tena miakatra loatra ny hafanany na sempotra be izy ka mila mampiasa fitaovana ma­no­kana hanokafana ny tratrany sy ny lalan-drivotra. Voala­zan’ ny dokotera fa vokatry ny fahamainan’ny rivotra sy ny fahalotoan’ny rivotra vokatry ny doro tanety no mahatonga ny aretin-tratra mampijaly ny zaza. Ankoatra ny gripa mahery, mamely koa ny aretin-kibo vokatry ny fihinanana voankazo tsy voadio matetika. Eo koa anefa ny rano tsy voadio amin’izao fahavaratra izao indrindra ho an’ireo mampiasa vovo.